Theresa May oo dib u dhigtay cod u qaadistii heshiiska Brexit • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Theresa May oo dib u dhigtay cod u qaadistii heshiiska Brexit
December 10, 2018 - By: Hanad Askar
Raysalwasaaraha UK Theresa May ayaa maanta oo Isniin ah sheegtay in dib loo dhigay codkii uu Baaramaanka UK u qaadi lahaa heshiiska Brexit oo ay xukuumadeeda la gaartay wadamada kale ee Midowga Yurub.
Heshiiskan oo qeexaya qaabka ay Britain uga baxeyso EU-da ayaa ahaa mid laga soo shaqeenayey labadii sano ee lasoo dhaafay, balse waxaa heshiiskan si weyn u dhaliilsan inta badan Xildhibaanada oo ay ku jiraan kuwa xisbiga Xaakimka Conservative, arrintaasi oo cabsi gelisay Ms.May inay weyso aqlabiyada Xildhibaanada oo heshiiskan codka u qaadi lahaa maalinta beri ah.
Arrintan ayaa waji gabax ku ah Ms.May oo sheegtay inay markale isku dayi doonto in ay wax ka bedasho qodobada heshiiska qaarkood, haseyeeshee wadamada Midowga Yurub ayaa iyagu horey u sheegay inaan dib loogu noqon doonin gorgortanka iyo heshiiska horey loo gaaray.
Theresa May ayaa lagu wadaa inay ka qeyb gasho shirka Madaxda EU-da yeelanayaan Khamiista soo socota oo ay codsi cusub u gudbin doonto balse xukuumada May ayaa qarka u saaran fashilka hirgelinta kabixitaanka EU-da oo ay horey shacabka Ingiriiska ugu codeeyeen afti.
Xisbiga Mucaaridka ee Labour ayaa hada codsanaya in dib loo qabto Afti labaad iyagoo sheegay in ay jiraan dad badan oo doonaya in UK aysan ka bixin EU-da, halka xubnaha xagjirka ah ee xisbi xaakimka ay iyaguna diidan yihiin qaar kamid ah qodobada heshiiska hada horyaal oo ay sheegeen inuu awood dheeraad ah siinayo Midowga Yurub.